ဤပဟေizိဖြင့်သင်၏တိရစ္ဆာန်ဝိညာဉ်ကိုရှာဖွေပါ။ - Hanukeii
သူတို့ကသဘာဝတရားနဲ့လူသားရဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုဖြတ်တောက်ဖို့အရမ်းခက်ခဲတဲ့နှောင်ကြိုးလို့ပြောကြတယ်။ သူတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာစွဲကိုင်ထားသည့်ယုံကြည်ချက်များဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ရန်နှင့်အားပြန်ဖြည့်ချင်သည့်အခါတိုင်းသူတို့၏သဘာဝအကျဆုံးဘက်နှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန်အမြဲလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ သမိုင်းမတင်မီခေတ်ကတည်းကပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားသည်ပုံဆွဲခြင်းဖြင့်အများစုကိုယ်စားပြုခဲ့သော်လည်းဇာတ်ကောင်များသည်သူတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များတိုးတက်ရေးတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအမြဲလိုက်ပါလေ့ရှိသောတိရစ္ဆာန်များဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုများစွာသည်ငါတို့အားလုံး၌ငါတို့ရှိသည်ဟူသောယုံကြည်ချက်ဖြင့်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။တိရစ္ဆာန်စိတ်ဝိညာဉ် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာအချို့ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူများ၊ စိတ်ဆန္ဒများ၊ အရသာအချို့ကိုတောရိုင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖြင့်တိုက်ရိုက်ဖော်ထုတ်သည်။
မင်းကဘယ်သူလဲမင်းမသိသေးရင်တိရိစ္ဆာန်ဝိညာဉ် ၎င်းကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုသည် Hanukeii ကျွန်ုပ်တို့သည်တိရိစ္ဆန်နိုင်ငံ၌စိတ်အချရဆုံးတိရိစ္ဆာန်များကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးမည့်အလွန်တိုတောင်းသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပဟေဋ္ဌိတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
ဒိုင်းနမစ်သည်ရိုးရှင်းသည်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ၊ အရသာများနှင့်ဝါသနာများနှင့်ဆက်စပ်သောမေးခွန်း ၁၀ ခုရှိသည်။ အက္ခရာတစ်လုံးစီတွင်ဂဏန်းတန်ဖိုး (A = 10, B = 1, C = 2, D = 3) ရှိသည်။ သင်မေးခွန်းများကိုဖြေပြီးသည်နှင့်သင်၏အဖြေများကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးနောက်ဆုံးရမှတ်ကသင့်ကိုသတ်မှတ်ပေးသည် တိရစ္ဆာန်ဝိညာဉ်။ သင် ... လုပ်ပါသလားအကောင်းဆုံးအပိုင်းကဘာလဲသိလား။ ငါတို့မှာသူတို့အားလုံးရဲ့ ဦး ထုပ်တွေရှိတာကိုး။
၂။ လူမှုရေးဘဝ (ပါတီများ၊ ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ) သို့ကြွလာသောအခါသင်အများအားဖြင့်နှစ်သက်သည်။
၃။ ဒီကဏ္ aspects တွေထဲကဘယ်ဟာကိုကြိုတင်စီစဉ်ရတာပိုကြိုက်လဲ။
၄။ အလုပ်အကိုင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ အောက်ပါကဏ္ofများအနက်မှသင်၏အာရုံကိုအဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးမှာ
၆။ သတ္တုအရာဝတ္ထုများ၏အသံနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏တုံ့ပြန်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်
D. ငါသူတို့ကိုနားထောင်သည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ကိုဂရုမစိုက်ပါ။
၇။ အောက်ပါအရောင်များအနက်မည်သည့်အရောင်များနှင့်သင် ၀ တ်စားဆင်ယင်ပုံကိုသင်ခွဲခြားသတ်မှတ်လေ့ရှိသနည်း။
A. Trekking ။
A. Netflix ကြည့်ရင်းအိပ်ပျော်နေသည်။
C. သူငယ်ချင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်အတူထမင်းစားပါ။
B. BBQ နံရိုး။
D. Valencian Paella
A. ရဲရင့်ခြင်း (သင်ကအန္တရာယ်များတာကိုကြိုက်တယ်) ။
B. တိတ်ဆိတ်ခြင်း (သင်ကဖျန်ဖြေသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့၊ သင်အနည်းငယ်ကိစ္စများအတွက်စိတ်ပူတတ်သည်) ။
C. အနတ္တ (သင်ကအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဗဟိုပြုပြီးအလယ်ဗဟိုအဆင့်ကိုနှစ်သက်သည်။
D. စူးစမ်းလိုစိတ် (သင်သည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်သူ၊ သင်အရာအားလုံးကိုသိလိုသည်) ။
B. ဒေါသထွက်ခြင်း၊ စိတ်မြန်ခြင်းဖြစ်ခြင်း၊ ဒါပေမယ့်မင်းအမှားကိုဝန်ခံပြီးတောင်းပန်ပါ။
C. ပုတ်ခတ်စကားတခွန်းကိုမပြောခင်၊ မင်းအခြေအနေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးပြေလည်အောင်ကြိုးစားပါ။
ဒါဟာငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းဆိုရင်ငါတို့ကမင်းကိုအမြဲအာရုံစိုက်လိမ့်မယ်။ မင်းကရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဘဝကိုမြင်ရတာကြိုက်တယ်၊ ပြဿနာတွေရဲ့အနံ့တွေ၊ ရန်ဖြစ်တာတွေ၊ ငြင်းခုံတာတွေကမင်းနဲ့မလိုက်ဘူး။ မင်းရဲ့နေ့ရက်တွေကိုစားဖို့ကောင်းကောင်းစားပြီးကောင်းကောင်းအနားယူပါ။ မင်းကအားကစားအတွက်မင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုလို့မမြင်ပါဘူး၊ တကယ်တော့မင်းကအိပ်ရတာပျော်ပြီးမင်းအကြိုက်ဆုံးစီးရီးနဲ့မာရသွန်ပြေးပွဲကြည့်တာ။ မင်းကိုလွှမ်းမိုးတဲ့မုန်တိုင်းမရှိဘူး၊ သူတို့ကမင်းကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့piña colada နဲ့နေသာတဲ့နေ့မှာကမ်းခြေမှာထားခဲ့မယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသင်သည်အလွန်ဒဿနဆန်သည်၊ သင်စာများကို ၀ ါသနာပါပြီးတစ်ယောက်တည်းနေချိန်ကိုသင်နှစ်သက်သည်။
မင်းဟာမင်းရဲ့ကာယကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ခိုင်မာတဲ့မိခင်ဗီဇကြောင့်ဘဲ။ သင်ကကမ္ဘာကြီးကိုခရီးသွားရတာကြိုက်တယ်၊ တစ်ယောက်တည်းသွားနိုင်ရင်အဲဒါကပိုအာရုံစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်တယ်။ မင်းမှာကြံ့ခိုင်ကြံ့ခိုင်တဲ့စရိုက်လက္ခဏာရှိလို့မင်းဘဝမှာနည်းနည်းလေးမှမကြောက်ဘူး၊ မင်းရဲ့အိပ်မက်တွေပန်းတိုင်တွေကိုလိုက်ရှာတာကဒီနေ့ရဲ့အစဉ်အလာပဲ။ သင်သည်အားကစားနှင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများကိုနှစ်သက်သည်၊ သင့်တွင်သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းသေးသေးလေးရှိပြီးဆူညံသံများစွာရှိသောနေရာများတွင်နေခြင်းထက်မိသားစုကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလေ့ရှိသည်။
ဉာဏ်ပညာလည်းရတော့တယ်။ မင်းလုပ်မယ့်အရာဒါမှမဟုတ်မင်းလုပ်မယ့်အရာတိုင်းကိုတွေးတောဆင်ခြင်တယ်၊ မင်းသရုပ်ဆောင်မလုပ်ခင်စဉ်းစားတယ်၊ အဲဒါကိုမင်းကလုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့အခါမင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကအများအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကအကြံဥာဏ်တောင်းဖို့ရံဖန်ရံခါလာလေ့ရှိတယ်။ ကိစ္စအများစုတွင်သင်တစ် ဦး တည်းပြုမူလေ့ရှိပြီးလူအနည်းငယ်နှင့်တိတ်ဆိတ်မှုနှင့်တိတ်ဆိတ်သောနေရာများကိုသင်နှစ်သက်သည်။ သင်ရှက်တတ်သည်၊ သို့သော်သင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပျော်စရာကောင်းပြီးသစ္စာရှိသည်ဟုယုံကြည်လာသည်နှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုနားထောင်ပြီးသူတို့နှင့်အတူအချိန်ကိုကြိုက်သည်။
သင်ဟာဟန်ချက်ညီညီနေလိုတဲ့လူတစ်ယောက်၊ မင်းမှာအရမ်းကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်၊ အဲဒါကမင်းကိုလုံခြုံပြီးစိတ်ချရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်စေတယ်။ သင်သည်တရားမျှတမှုနှင့်အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးသူ၊ သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ချစ်ရသူများကိုသစ္စာရှိသည်။ သင်ကလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုအကူအညီနဲ့လမ်းညွှန်မှုပေးရတာကြိုက်တယ်။ သို့သော်အခြားသူများကိုယုံကြည်လာသည့်အခါသင်အနည်းငယ်သတိထားရသည်။ သင်အမြဲသတိရှိနေတယ် ကြက်သွန်မြိတ် ၎င်းသည်သင်နှင့်သင်၏နီးစပ်သူများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ တောင်များ၊ မြက်ခင်းများနှင့်သစ်တောများသည်သင်၏နေရာများဖြစ်သည် detox များသောအားဖြင့်မင်းရဲ့တိရိစ္ဆာန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်။
သင်ဟာတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပြီးအနုပညာကိုသင်လုပ်သမျှကိုအသက်သွင်းတယ်။ မင်းကကုမ္ပဏီကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကတစ်ခါတစ်လေမှာစိတ်ကူးသစ်တွေနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဖို့တစ်ယောက်တည်းအချိန်လိုတယ်။ များသောအားဖြင့်သင်ဟာစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုခုနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့လေယာဉ်ကမင်းဘ ၀ အတွက်ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္မှာရှိတယ်။ သင်ခရီးသွားရတာကိုနှစ်သက်ပြီးလေဆိပ်ကအမြဲလိုလိုမင်းအကြိုက်ဆုံးနေရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ မင်းကဖက်ရှင်ကျကျနေရတာကိုကြိုက်ပြီးတခါတလေအာရုံစိုက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ရမယ်။
မင်းဟာသမုဒ္ဒရာရဲ့မိဖုရားပဲ၊ မင်းကကမ္ဘာရဲ့သမုဒ္ဒရာအားလုံးမှာတကယ်ရှိနေတာဘဲ။ သင်ဟာပင်ကိုယ်ဥာဏ်ရှိပြီး မင်းကမင်းရဲ့အသိဥာဏ်၊ ၀ မ်းမြောက်မှု၊ ခင်မင်မှုနဲ့ရက်ရောမှုတို့အတွက်ထင်ရှားတယ်။ မင်းကများသောအားဖြင့်အုပ်စုလိုက်လုပ်တယ်၊ မင်းကအရမ်းတက်ကြွတဲ့လူမှုဘ ၀ နဲ့အများကြီး၊ သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရချင်တယ်။ မင်းမြန်မြန်စဉ်းစားတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းလည်းကောက်ချက်ချတယ်၊ မင်းကိုယ်မင်းဂရုစိုက်တာကိုကြိုက်တယ်၊ မင်းကအရမ်းကျန်းမာတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုရတတ်တယ်။
ငါတို့ကပင်ကိုယ်စတိုင်လ်နဲ့မူလဇစ်မြစ်အကြောင်းပြောကြရင်မင်းသေချာတယ်။ မင်းလူတွေ ၀ န်းရံတာ၊ ဖက်ရှင်ကျဖို့၊ နေ့တိုင်းအစီအစဉ်တွေရှိဖို့ကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကိုယ်မင်းအခြားသူတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုဘယ်တော့မှမခံရဘူး၊ တကယ်တော့မင်းသူငယ်ချင်းတွေကမင်းကိုပုံမှန်အတိုင်းစကားတွေပြောလိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုလူအနည်းစုကပြောနိုင်တယ်။ ပြသနာတွေကြုံတဲ့အခါမင်းကဘယ်သူနဲ့မှမင်းရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုဘယ်သူ့ကိုမှမဖြတ်တောက်ချင်တာကြောင့်မင်းကအဝေးကိုခိုးပြီးဝင်သွားတာဘဲ။ သင်ဟာလူမှုရေးအရတက်ကြွနေသလိုပဲသင်လည်းတခါတရံဒုက္ခရောက်တာကိုကြိုက်ပေမယ့်သင်ကအမြဲတမ်းလိုလိုအဲဒါကိုရှောင်ရှားတတ်သူပါ။
မဟာဗျူဟာမြောက်ရဲရင့်သူ၊ ထက်မြက်သူ။ သင်သည်မြေကြီးပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာနှင့်မဆိုလိုက်လျောညီထွေစွာနေနိုင်သည်၊ သင်သည်အလွန်သတိထားနိုင်စွမ်းရှိပြီးineတ္ထိယဖြစ်သည်။ သင်ဟာအခြားသူတွေအတွက်မကြာခဏရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပြသနာတွေကိုအဖြေရှာဖို့အမြဲကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ပါ၊ သင်ကအဆိုပြုတာနဲ့တီထွင်ဖန်တီးတာကိုကြိုက်တယ်။ သင်ဟာတီထွင်မှုနဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုအလုပ်တွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်။ သင်သည်အထီးကျန်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးသင်၏မိသားစုနှင့်မျှဝေပါ။ မင်းကမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘ ၀ နဲ့အပိုင်ယူထားတာ။ မင်းကဆက်ဆံရေးကိုနောက်ပြောင်တယ်၊ ထုတ်ဖော်တယ်၊ နည်းနည်းပြင်းထန်တယ်။
မင်းမှာမင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ကကလေးတစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းအသက်သွင်းထားတယ်၊ အဲဒါကအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ မင်းကဘဝကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့အမြဲသိချင်စိတ်ပြင်းပြတဲ့မျက်မှန်နဲ့အမြဲကြည့်လေ့ရှိတယ်။ သင်လုပ်သောအရာအားလုံးနီးပါး၌သင်ကံကောင်းလေ့ရှိသည်၊ ၎င်းသည်သင်ဝါးအများကြီးစားသောကြောင့်လား။ နောက်တာပါ၊ ဒါပေမယ့်အရှေ့တိုင်းယဉ်ကျေးမှုမှာဝါးကငွေကိုဆွဲဆောင်တယ်၊ အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီးမင်းမှာရှင်းလင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်။ မင်းရဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့ဟန်ချက်ညီအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာသိတယ်၊ altruism ကိုအရမ်းအလေးထားတယ်၊ သူတစ်ပါးကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ပရောဂျက်တွေကိုလုပ်တယ်၊ မင်းပျော်တယ်၊ စားတယ်၊ ပျော်တယ်၊ စားတယ်။ မင်းကအထောက်အပံ့မပေးတာ၊ ဗဟိုပြုတာ၊ ကောင်းတဲ့ဂီတနဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကမင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘ ၀ မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။